Shiinaha PET BANNAAN EE ROLL UP-ECO warshad iyo soosaarayaasha | Shawei
Qodobka Shayga: DP-T004
Magaca: PET Banner for Roll Up-Eco
Isku darka: 320g PP + PET
PET Banner ee Roll Up-Eco
Faahfaahinta alaabta: Eco dareeraha Gray Back PET Banner Waa nooc ka mid ah walxo isku dhafan oo ay soo saareen PET iyo PP oo leh hanti dusha sare leh. Maaddadu waa mid fidsan oo siman, sawirka badiyaa waxaa loo isticmaalaa bandhig iyo bandhig. Miisaanka mitir laba jibbaaran wuxuu gaarayaa 320g. Dahaadhku wuxuu ka kooban yahay tayo sare leh PET wax ceeriin ah oo nuugista khadku aad u fiican yahay. Maalinta dirista ee caadiga ahi waa 15-20 maalmood. Ku xirxirida kartoon adag oo leh macaamiisha Logo iyo dhogorta luul & bareesada si loo hubiyo in alaabtu aysan ku dhaawaceynin safarka. Muunado waa bilaash in la helo oo la geeyo UPS, DHL.Fedex, iwm. Si loo hubiyo in macaamiishayadu ay hubin karaan alaabada sida ugu dhakhsaha badan.
Cabbirka badeecada: 0.914 / 1.07 / 1.27 / 1.37 / 1.52 * 50M
Hore: DHAQAALAHA BACKLIT – CAD CAD
Xiga: DHARKA Bannaanka Dharka